KULMIYE oo ka hadlay dhacdooyinkii Siyaasadeed ee dalka waajahay sanadkan maantu u dambayso | Somaliland.Org
December 31, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE, ayaa maanta ka hadlay dhacdooyinkii Siyaasadeed ee dalka iyo Xisbigaasba soo maray sanadkii tegay, isla markaana waxay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ay rejaynayaan sanadka cusub ee miilaadiga ee beri bilanaya.
Hoggaanka sare ee Xisbigaas oo maanta Shir-jaraa’id ku qabtay Xaruntooda dhexe ee Hargeysa, ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dhacdooyinkaas. Ku-simaha Guddoomiyaha, ahna Guddoomiye-xigeenka Xisbigaas Muuse Biixi Cabdi ayaa halkaa ka akhriyay Warsaxaafadeed uu ku saxeexnaa isagu.
“RAADKII SANADKII TAGAY EE 2009 IYO ARAGTIDA XISBIGA KULMIYE EE SANADKA SOO SOCDA EE 2010
-Nabadgelyo guud oo dalka ka jirtay, iyadoo geeska Africa dagaalo badani ka socdaan.
-Dhoofkii xoolaha wakhtigii Xajka oo ahayd fursad wacan, walow aan si rasmi ah loo furin.
-Arday badan oo ka qalin jebisay Jaamacadaha kala duwan ee dalka JSL, in kasta oo aanay badankoodu shaqo helin.
-Budhcad badeed Ciidanka ilaalada Xeebaha Somaliland ka soo qabteen badda.
-Wufuud kala duwan oo dalka soo booqatay.
-Ganacsiga xorta ah oo talaabooyin horumar ah qaaday.
-Dagaalada koonfurta Soomaaliya ka socda oo saamayn xun ku yeeshay hab-sami-u-socodka hawlaha dhaqaale iyo horumarineed ee Somaliland. Reer Somaliland waxa aad uga warwarsan yihiin in dagaalada koonfurta firirkoodu soo gaadho, waa cabsi joogta ah oo hantaaqaysa maamul wanaagii, horumarkii dhaqaale iyo kalsoonidii Bulshadu wax badan ku qabsan lahayd.
-Shirqoolkii cadowga Somaliland soo maleegay ee lagu dilay Taliyihii qaybta bariga ee Magaalada laascaanood.
-Waa sanadkii ugu dhimashada badnaa dhalinyarada tahriibta ee Somaliland. Waa nasiib darro in aynaan wali u helin xal ay dhalinyaradu kaga negaato is-miidaaminta.
-Doorashadii Madaxtooyada, tii Guurtida, iyo tii Deegaanka oo dhammaantood muddo dhaafay. Arrintaas oo keentay khilaaf siyaasadeed oo dalka gil-gilay. Waxa iska horyimid Xisbiyada Mucaaridka ah iyo Xukuumada, dhinaca kalena waxa isk horyimid Golayaasha sharci-dejinta iyo Xukuumada.
-Mudaharaadyo lagu diidan yahay muddo dhaafka oo dalka ka dhacay. Xukuumada oo mudaharaadyada ku dishay, ku dhaawacday, kuna xidh-xidhay muwaadiniin badan.
-Rasaastii Ciidanka boolisku ku fureen Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md. Axmed Maxamed Siilaanyo, oo aan xukuumadu wax talaabo ah ka qaadin.
-Sanadkii 2009 Xisbiga KULMIYE, Waxa soo maray shilal naxdin leh oo keenay dhimasho iyo dhaawac.
-Waa sanadkii ugu horeeyey ee Somaliland taladeeda ku filnaan wayday ee dibeda laga soo fara-geliyey.
-Sanadkii 2009, in kastoo hantidii ma-guurtada ahayd ee Qaranka Xukuumadu xaraashtay, inkasta oo dhaqaale xoog leh ka soo galay dhoofkii xoolaha, in kasta oo cashuuro Wasaaradu ku kordhisay sifo sharciga baalmarsan, hadana, dhaqaalaha dalku muu samayn horumar, mushaharooyinkii lama kordhin, mashaariic horumarin ah lama samayn, shaqo la’aantii lama yarayn, dhalinyarada garoomo ay ku cayaaraan looma kordhin, kuwii horena lama dayactirin, adeegii caafimaad horumar lagama samayn, biyo yaraantii lagama hawl-gelin, xataa biriishkii Hargeysa ee qabyada ahaa waxba laguma kordhin oo waa halkisii.
Rejada uu Xisbiga KULMIYE qabo sanadka soo socda ee 2010-ka.
KULMIYE wuxuu aaminsan yahay in ay Somaliland horumar samayn karto haddii aynu helno talo hufan daacad ah oo dalka lagu hogaamiyo, waxa hubaal ah in dhaqaalaha dalku haddii laga xakameeyo musuqa, si wanaagsana loo qorsheeyo in shaqaalaha iyo ciidamada mushahar ku filan la siin karo, iyo in da’yarta shaqooyin loo abuuri karo.
Sida ku cad daraasadaha UN-ka Shacbiga Somaliland 54% waa Dhalinyaro, da’doodu tahay ilaa 20 jir, 5% ayaa ka weyn 65 jir, dhinaca kale 51% waa Haween, 70% waa reer miyi. Xisbiga KULMIYE, wuxuu u arkaa in talada dalka marka la qorshaynayo lagu saleeyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo baahiyahooda kala duwan.
Xisbiga KULMIYE barnaamijkiisa waxa udub dhexaad u ah talo wadaag. Xisbiga KULMIYE wuxuu wada-shaqayn dhaw la yeelanayaa hay’adaha Qaranka, qaybaha bulshada ee kala ah, Culimada, Madax-dhaqameedka, Ganacsatada, Ururada xirfadlayda ah (Professional associations), Warbaahinta, suugaan yahanka, Haweenka, dhalinyarada iyo Xisbiyada siyaasiga ah.
Xisbiga KULMIYE, wuxuu ku kalsoon yahay isaga oo ay is-kaashanayaan muwaadiniinta Somaliland ee horumarka jecel inay ku guulasan doonaan doorashooyinka soo socda. Taas oo keeni doonta is-bedelka dalku u baahan yahay ee aynu kaga bixi karno musuqa, tahriibka, iyo shaqo la’aanta.”
Mar Guddoomiye-xigeenka la waydiiyay tallaabada ay Xisbi ahaan ka qaadayaan haddiiba ay talada ku guulaystaan hantida umadda ee la iibiyay, waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi, “..Xisbiga KULMIYE haddii uu talada qabto iyo haddaanu qabanba waxa uu ballan-qaadayaa inuu daba taagnaado cid kasta oo sharci-darro ku qaadatay hantida Umadda.”